Semalt waxay muujinaysaa xaqiiqada ku saabsan Awoodda SEO
Raadinta mashiinka raadinta (SEO) waa habka loo sameeynayo website-kamuuqaalka ku jira raadinta dabiiciga ah. SEO wuxuu ku lug leeyahay shaqada taatikooyin kala duwan kaas oo ka caawinaya bogga inuu ku sugnaado boos wanaagsan oo ku habboonnatiijooyinka raadinta ee qaar ka mid ah waxyaabaha gaarka ah ama ereyo muhiim ah oo la raadin karo. SEO wuxuu ku jirey farsamaynta barta badan ee bilawga ah tan iyo bilowgiiinternetka. Si kastaba ha noqotee, shirkado badani si buuxda uma fahmin xaddidaadaha farsamooyinka ku meel gaarka ah ama isticmaalka farsamooyinka automatedon SEO
Automating SEO wuxuu noqon karaa hab hawleed dheer, iyo waxyaabo badan oo ah horumarinta boggawaxay u baahan karaan qaar ka mid ah taabashada aadanaha oo dheeraad ah, oo aan ahayn automation. Si kastaba ha noqotee, fikradda xalalka degdegga ah ee lagu xalinayo dhibaatooyinka qaarkood ayaa saameyn ku leh liiskaSidaas daraadeed boggaga internetka maahan wax faa'iido leh.
Frank Abagnale, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Dijital ah waxay sharraxayaan isbarbardhigga isbarbardhigga iyo liidashada ee la shaqeynaya SEO-ga.
Maalmahan, qalabyo badan ayaa loo sameeyay si ay kaaga caawiyaan SEO-gaaga.Waxaa jira qalab loogu talagalay cilmi-baarista muhiimka ah, falanqaynta dhabarka, qiimeynta taraafikada, jiilka warbixinta, iwm. Wax kasta oo aad u baahan tahay mashiinka raadintaadaHagaajinta, waxaad ka heli kartaa internetka. Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaa jira wax badan oo sahlan in la isticmaalo content iyo qalabka maareynta websaydhkakuwaas oo ka caawiyay shabakadaha internetka inay kor u qaadaan tirakoobkooda darajadooda. Si kastaba ha ahaatee, xitaa inkastoo platformada Wix iyo WordPress ay sameeyeen dhowr SEOqalabyada, waxay dhif u yihiin inay dadka ka caawiyaan inay ku daraan boggooda internetka sare. Suurtogal maaha in hal xal loo isticmaalo dhammaan ganacsiyada, waana sababtaasSemalt waxay ku talineysaa in la sameeyo xeelado gaar ah oo SEO ah, oo ku habboon kiis gaar ah.
Miyay macnaheedu tahay in aad si sax ah u sameyso?
Haddii aad u maleyneyso in jawaabtu haa tahay, ma aadan soo dhawaynfiiri waxa ka dhigaya sixirka SEO. Bilowgii, Google ayaa baari jiray bog kasta oo shabakad ah si loo go'aamiyo weydiimaha raadinta iyo meeshiisii ​​natiijooyinka raadinta.Kadibna, guusha ereyga muhiimka ahi wuxuu ku xiran yahay inta jeer ee lagu soo sheego mawduuca. Tani waa sida farsamada qoraallada qarsoonoo ay sameeyeen dhakhaatiirta Black Hat SEO, taasina waa sababta Google looga saaray habkan. Next, Google waxay bilowday tixgelin muhiimadda ay leedahaybacklinks iyo qadarkooda. Tani waxay sidoo kale ka faa'iideysatay webmasters, kuwaas oo doonaya hab raqiis ah oo deg-deg ah TOP, taasoo keentay in Google uu isbedeloistiraatiijiga mar kale..
Waqtigaan, Google algorithm wuxuu wax ka qabtaa arrimo badan oo kala duwankoonto: laga bilaabo dhabarka si aad u hesho ereyada muhiimka ah ee warbaahinta bulshada. Isticmaalka hal element waa kuma filna in lagu hormariyo astaantaada TOP natiijooyinka raadinta.Si kastaba ha noqotee, berrito dhammaan dhismahan waa la bedeli karaa iyadoo la raacayo hirgelinta algorithm cusub.
Google ma aha mashiin. Waa shirkad, khabiiro, ciddasi joogto ah u falanqeynaya waxqabadka mashiinka raadinta, habdhaqanka dadka webmasters iyo sameynta fududaanta dadka isticmaala mudnaanta. Sidaa darteed, marwaxay arkayaan hoos u dhaca helitaanka mashiinka raadinta, waxay dalbadaan isbeddelo lagama maarmaan ah si looga takhaluso goobaha wax ka qabta isticmaalka Google.Mar kasta oo ay jirto caqabad, Google wuu isbeddelaa.
Xitaa qalabkii ugu quruxda badnaa ee la yaabay ma sii wadi karokobcinta dadka oo hagaya mashiinka raadinta. Qalabkaaga ayaa laga yaabaa inuu hadda shaqeeyo, laakiin asbuuc gudahood waxay noqon doonaan wax aan faa'iido lahayn oo ku saabsan xeerarka cusub.Marka, haddii aad rabto wax kuu keeni kara natiijooyin waqti dheer ah oo aad ku adkaysato si dagdag ah oo isdaba joog ah ee algorithm Google,Hey'adda SEO ayaa weli ah saaxiibkaaga ugu fiican. Markaad si dhow ula shaqeysid shakhsiyaadka sameeya SEO, mid ayaa u imaan karta inuu barto isbeddello suuq ah oo ku saabsanhabka ay u shaqeeyaan boggaga kala duwan
Tusaale ahaan, Joost de Valk, aasaasaha, iyo abuurahaYoast SEO ee plugin WordPress ayaa isku raacay inkastoo suurtagalnimada qalabyada jira oo badanaa bixiya hab-dejiye-iyo-illowsi,Naqshadeynta SEO waa nidaam adag oo ku lug leh si ka badan sidan. Tusaale ahaan, makiinadaha iyo software waxay kaliya u adeegi karaan farsamadaqayb yar oo SEO ah qayb ahaan. Horumarinta dulsaarka iyo suuqgeynta fayrasku waxay u baahan yihiin heerka sare ee kaqaybgalka dadka si ay u shaqeeyaan.
Naqshadaynta SEO waa nidaam taas oo ka adag kanwaxaad u maleyn kartaa. Qalab badan oo koofiyado cad oo horumarinta SEO ah ayaa ballanqaadaya in ay si dhaqso ah u siiyaan arrimaha ku meel gaarka ah Si kastaba ha noqotee, waxaa jira weli qaar sareeyaheerka ka qaybgalka ee horumarinta content. Qalabka SEO waa lagama maarmaan waxayna nafta u fududeyneysaa inta badan hawlaha u baahanfarsamo. Si kastaba ha ahaatee, kuma xaqiijin doonaan booska # 1 ee natiijooyinka raadinta: marka ugu fiican, waxay ku sii hayn doonaan goobtaada inay hoos u dhigtoxitaa safka, xitaa xitaa faa'idadan ayaa la dhaafi doonaa kadib isbeddel algorithm.
Mashruuc isbedbedel ah oo aan toos ahayn wuxuu damaanad qaadi karaa inuu beddelo shaqada adagku lug leh hawlaha horumarinta maadooyinka sida isdhaafinta content, ka shaqeynta xiriirinta ku jirta iyo xulashada kelmadaha muhiimka ah maadaama aan si sax ah loo gaari karinisticmaalka makiinadaha. Sidoo kale, adigoo isticmaalaya qaab si buuxda u shaqeeya ayaa loola jeedaa bixinta dabacsanaanta iyo iswaafajinta aad u baahan tahay haddii mashiinka raadintahabsamida habsami-u-socodka si lama filaan ah ayaa isbeddela Ilaa iyo inta uu Google ka shaqeeyo ganacsatada maaha AI, wada shaqeynta Khubarada SEO waxay ahaan doonaan habka ugu wanaagsan ee lagu guuleysto jagooyinka TOP Source .